युवा चिकित्सक संघको पाटन अस्पताल समिती गठन भएको छ । आज भएको युवा चिकित्सकहरुको भेलाले डा. प्रशिश राई नेतृत्वमा अस्पताल समिति गठन गरेको हो ।
पाटन अस्पतालले तलब घटाएपछि पाटन अस्पतालका चिकित्सक एवं कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अस्पतालले करारका चिकित्सक तथा कर्मचारीको तलब बढाउनुको साटो घटाएको भन्दै उनीहररू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। पाटन अस्पतालमा कार्यरत एक हजार दुई सयमध्ये ४५० भन्दा बढी कर्मचारी करारमा कार्यरत छन्।
यस्तै स्टाफ नर्सको तलब पनि ५ हजारले घटाइएको छ। २८ हजार रुपैयाँ पाउने गरेकोमा अहिले घटाएर २३ हजारमा झारिएको छ। ३ वर्षदेखि अस्पतालमा कार्यरत एक स्टाफ नर्सले आफूहरुलाई अस्पतालले अन्याय गरेको बताइन्। ‘अनुभवका आधारमा सबैका तलब बढ्दै जान्छ’, उनले भनिन्, ‘तर हाम्रो चाहिँ घटेको छ।’
संघले चिकित्सकको हक अधिकार ,गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा , स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना लगायतका कार्यमा निरन्तर लागिरहने अध्यक्ष्य डा. राईले बताउनुभयो ।
संघको Website (www.yda.org.np) बाट साभार